The Shwe Ya Min Foundation
ကြင်နာသနားတတ်ခြင်းသည် နားမကြားသူကို ကြားစေနိုင်ပြီး မျက်စိမမြင်သူကို မျက်စိမြင်စေနိုင်သည့် ဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်သည်။
နံနက်ခင်းတိုင်းမှာထွက်ပေါ်လာသည့် နေရောင်ခြည်တိုင်းဟာ တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ နေ့ရက်တွေကို ပိုတောက်ပလာအောင်ကူညီပေးဖို့ရန် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဖိတ်ကြားလွှာဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှကလေးများ၏ဆင်းရဲ မွဲတေမှုကို အတွင်းကျကျသိမြင်ခြင်း
© 2017 The Shwe Ya Min Foundation. All Rights Reserved.
English Site >>
ကလေးများအတွက် “ကူညီပါရစေ” ဖုန်းလိုင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ခံယူချက်တာဝန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးစသည် ချို့ငဲ့အားနည်းနေသော ကလေးသူငယ်များအား သူတို့လိုအပ်နေသည့် ဆင်းရဲမွဲတေခြင်းသံသရာစက်ဝိုင်းအတွင်းမှ လွတ်မြောက်စေရန်ဖြစ်ပါသည်။
ရွှေယမင်းဖောင်ဒေးရှင်း၏ ပရဟိတနှင့်ပတ်သက်သည့် ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အိမ်ခြေယာမဲ့များ၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၊ အနှိပ်စက်ခံလူတန်းစားများနှင့် ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးစသည်ဖြင့်အစစအရာရာ အားနည်းချို့ငဲ့နေသော ကလေးသူငယ်၊လူငယ်လူရွယ်များအား ပညာရေးသင်ကြားနိုင်ရန်၊ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်ရန်၊ လမ်းညွှန်ပြသပေးနိုင်ရန်၊ ဘဝနေနည်းများကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရန်နှင့် UN မှချမှတ်ထားသော ကလေးသူငယ်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များနှင့်အညီ တည်ဆောက်ထားသည့် တစ်ခြားဂရိုဂရမ်များကိုလဲ စီစဉ်ပေးခြင်းအားဖြင့် ကူညီထောက်ပံ့ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။
သက်တမ်းနုသေးသည့် ပရဟိတကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက် ရွှေယမင်းဖောင်ဒေးရှင်းအနေဖြင့် တစ်ခြားအတွေ့အကြုံရင့် လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းကြီးများဖြစ်သည့် ထိုင်းနိုင်ငံမှ Childline Thailand Foundation နှင့် ဟောင်ကောင်နိုင်ငံမှ The Hub Children & Youth Centre တို့၏အတွေ့အကြုံများကို အသုံးချကာ ကူညီရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်လျှက်ရှိပါသည်။
ရွှေယမင်းဖောင်ဒေးရှင်းအနေဖြင့် ရွှေယမင်းဆိုသည့်အမည်သည် အလှူရှင်တွေနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဆဲနိုင်ငံတွေမှ ဆင်းရဲမွဲတေခြင်းသံသရာစက်ဝန်းအတွင်းကနေ လွတ်မြောက်ရန်အခွင့်အရေးအလွန်အင်မတန်နည်းပါးနေသည့်ကလေးငယ်များအကြားက မေတ္တာဂရုဏာ နှင့် အားပေးကူညီထောက်ပံ့မှုများစီးဆင်းသွားနိုင်ရန် ကျောထောက်နောက်ခံတစ်ခုဖြစ်လာမည်ဟုလည်း ယုံကြည်ပါသည်။
ဖောင်ဒေးရှင်း၏ ကနဦးအာရုံစိုက်လုပ်ဆောင်မည့်အပိုင်းများမှာ ရန်ကုန်မြို့အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ပရိုဂရမ်များနှင့် စတင်မည်ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းစဉ်များကိုလဲ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှ ဆင်းရဲနွမ်းပါးနေသောကလေးသူငယ်များအတွက် ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးနှင့် စိတ်ဓာတ်ရေးရာ အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမယ့် ပရိုဂရမ်များကိုစီစဉ်ပေးနိုင်ရန်အတွက် နေစရာ၊နားခိုးစရာနေရာများတည်ဆောက်ခြင်း
၂။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တစ်ခြားတိုင်းဒေသကြီးများမှ ဆင်းရဲနွမ်းပါးကလေးငယ်များအတွက်လဲ အလားတူဝန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ရန်အတွက် ရွှေ့လျားသွားလာနိုင်သည့်ကူညီရေးယာဉ်အစီစဉ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ခြင်းနှင့်
၃။ အိမ်ခြေယာမဲ့များ၊ အနှိပ်စက်ခံကလေးသူငယ်များနှင့် လူငယ်လူရွယ်များအတွက် ရန်ကုန်မြို့တွင် အရေးပေါ်နားခိုရာနေရာတစ်ခု(သို့) အများအပြားတည်ဆောက်ပေးခြင်း ။
ကြှနျမတို့SYF သညျ ၂၀၁၆ ခုနှဈတှငျ သနျလငျြမွို့နယျ ၊ အုပျဖိုစုရပျကှကျ၊ သိပ်ပံလမျး (သနျလငျြနာရီစငျအနီး) ဝိသုဒ်ဓါရာမ ခမျြးမွသေ့ာယာအေးစာသငျတိုကျကြောငျးဝငျးအတှငျး ရှယေမငျးအခမဲ့ ဆေးခနျးဖှငျ့လှဈရာမှ အစပွု၍ကြောငျးတိုကျတှငျ ပညာသငျကြားနသေော ရှမျးပွညျနယျတောငျပိုငျးမှ ခြို့တဲ့သော ကလေးအယောကျ၁၀၀ ဝနိးကငျြအား နထေိုငျရနျ အဆောကျအအုံ ၊ပညာရေး၊ ကနျြးမာရေး၊အစားအစာ၊ကြောငျးဝတျစုံ၊စာရေးကရိယာနှငျ့အခွားဖှံ့ဖွိုးရေးသငျတနျး ပို့ခခြွငျးစသညျ့လုပျငနျးမြားကို ဝနျထမျးအငျအားပွညျ့စုံစှာဖွငျ့ဆောငျရှကျလြှကျရှိပါသညျ။
၂၀၁၈ခုနှဈတှငျ ဒဂုံဆိပျကမျးမွို့နယျ ဝိသာခါသီလရှငျ ပညာရေးကြောငျးတှငျလညျး သနျလြှငျမွို့နယျကြောငျးကဲ့သို့ပငျ ကလေးငယျ အယောကျ၁၂၀ အား ထောကျပံပေးမှုအစီအစဥျမြားအား ဆကျလကျဆောငျရှကျခဲ့ပါသညျ။
၂၀၁၈ နှဈနှဈ သွဂုတျလမှစ၍ ရှယေမငျးဖောငျဒေးရှငျး အမြိုးသမီးမြား အသကျမှေးဝမျးကွောငျးဆိုငျရာ အခမဲ့သငျတနျးကြောငျး သုံးထပျဆောငျ ဆောကျလုပျရေးလုပျငနျးမြားအားစတငျကာ ၂၀၁၉ သွဂုတျလတှငျ အသကျမှေးဝမျးကွောငျးပညာသငျပေးခွငျး သငျတနျးသူ ယောကျ ၂၀ နှငျ့စတငျဖှငျ့လှဈနိုငျခဲ့သညျ။
အခမဲ့သငျကွားပေးသော သငျတနျးမြားမှာ -
၁ ။ စကျခြုပျသငျတနျး
၂ ။ မိတျကပျ ဆံပငျ သငျတနျး
၃ ။ ဆံပွငျပညာ (ညှပျ၊ကောကျ၊ဖွောငျး၊ဆေး)
၄ ။ အဂျလိပျစာ သငျတနျး (အခွခေံ)
၅ ။ ကှနျပြူတာ သငျတနျး
၆ ။ လူမှုပေါငျးသငျးဆကျဆံရေး ပညာသငျတနျး
အထကျပါသငျတနျးမြားကို သငျတနျးကာလ ၆ လ သတျမှတျ သငျကွားပေးလြှကျရှိသညျ ။
အခွားကလေး သူငယျနှငျ့ပတျသကျသော ကူညီထောကျပံ့ မှု မြားကိုလညျး လကျလှမျးမှီ သမြှဆောငျရှကျလြှကျရှိသညျ ။
နှဈစဥျ SYF ဝနျထမျးမြား ဆရာဆရာမမြား နှငျ့ ကြောငျးသူကြောငျးသားမြားအတှကျ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ ကွံ့ခိုငျရေးသငျတနျးမြား သငျကွားပေးလြှကျ ရှိသညျ။